Djay Pro dia tonga amin'ny iPad avy amin'ny tanan'ny Algoriddim | Vaovao IPhone
Nanapa-kevitra ny mpandefa Algoriddim fa handefa ny fampiharana malaza «djay Pro»Ho an'ny iPad androany. Ity rindranasa ity dia manome fitaovana amam-pahefana hametraka ny tombotsoan'ny asa DJ matihanina eo am-pelatananao. Ity rindranasa ity dia mitondra ny zava-baovao izay mifangaro tanteraka amin'ny Spotify, ka hanana fidirana eo noho eo amin'ny lisitray sy ny tranombokinay, na ivelan'ny Internet na an-tserasera avy amin'ny Spotify, hahafahantsika mamonjy toerana be dia be amin'ny fitehirizan'ilay fitaovana. Ho fanampin'ireo toetra fanovana feo matihanina azo takarina, dia mamela antsika hanao fananganana tena tsara tsy misy fetra saika karazana.
Hitanay ny rindranasan'ny mpampiasa maoderina izay manolotra fampiasa maro amin'ny fomba malefaka, azontsika atao ny milalao, mifangaro, manapaka ary mampifandray ireo dian-kira efatra miaraka. Ho fanampin'ny fampidirana kitendry marani-tsaina vaovao, hitantsika ny mety fandefasana làlana 4 amin'ny horonantsary 4K amin'ny 60FPS, lasa fitaovana azo antoka sy matanjaka ho an'ireo DJ matihanina. Ny multitasking IOS dia tafiditra tanteraka ao amin'ny SplitView, ary mahita ihany koa izahay hitsin-dàlana mihoatra ny 60 ho an'ny fitendry keyboard vaovao izay amidin'i Apple amin'ny iPad Pro.
Afaka mampifangaro feo sy horonan-tsary miaraka isika, tetezamita an-tsary maro eo anelanelan'ny horonantsary, mampiseho fahafaha-manao mihoatra ny 10, ary koa ny mety hanisy effets visuels avo lenta. Ahoana no hahakely kokoa azy io, manana anaram-boninahitra sy sary namboarina koa izahay. Anisan'izany ny mety hisian'ny raketo ny audio sy ny horonantsary ataonay amin'izao fotoana izao, ary koa ny fahafaha-mampiasa monitor ivelany hafa ankoatry ny iPad mba hahazoana tombony betsaka amin'ny fampiharana.
Ity dia iray amin'ireo rindranasa hafa izay mety hahatonga ny iPad Pro ho fitaovana tsy ilaina ho an'ny matihanina maro, tsy isalasalana fa horaisina an-tanana ho an'ireo izay natokana ho an'ny mozika, manokatra tontolo vaovao ahafahana manova. Ny fampiharana dia natomboka tamin'ny fihenam-bidy 30%, amin'ny vidin'ny 19,99€. Raha liana ianao dia tonga ny fotoana fampidinana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Djay Pro dia tonga amin'ny iPad avy amin'ny tanan'ny Algoriddim
Apple dia manampy toerana vaovao any Espaina sy Mexico ao amin'ny Maps
TimCook: "Ho an'ny mpandeha amin'ny alina ny herinaratra"